Zidane Oo Dib U Soo Nooleeyey Rabitaankiisii Tababaranimo - jornalizem
Zidane Oo Dib U Soo Nooleeyey Rabitaankiisii Tababaranimo
Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa dib u soo nooleeyey rabitaankiisii ahaa in uu u wareego dhinaca tababarida.
Ruugcadaagan ka mid ahaa xulka dalka Faransiiska ayaa mudadii uu ciyaarayay waxa uu kula guuleystay kooxihii iyo xulka dalkiisa koobab kala gedisan taasina waxa ay ka dhigtey in uu noqdo tababare aqoontiisa u gudbiya dhalinyarada haatan ciyaarta kubbada cagta.
“Waxaan doonayaa in aan isu diyaariyo sidii aan u noqon lahaa tababare,” ayay ka soo xigatay jariirada Le Journal de Saone-et-Loire Zidane “Ciyaarista kubbada waa aan ku soo dhex jirey muddo 20 sano ah waqti wanaagsana ku soo qaatay waxana aan doonayaa in aan aqoonteyda iyo waayo aragnimadaydaba la wadaago dadka kale.”
Zidane ayaa waxaa sidoo kale uu ka hadlay qaabkii uu ugaga fariistey ciyaaraha isagoo ku tilmaamay inay ahayd mid dhibaato iyo murugo lahayd.
Zidane ayaa sheegay in uusan weligii garoonka dhexdiisa ku ilmeyn balse kulankii lagu soo qatimayay mudadii uu garoomada ku soo jirey sanadkii 2006dii ayuu sheegay in uu ceshan waayay ilmada ayna ka soo hoortay taasoo ay kaamerooyinkana soo bandhigeen.
Ruugcadaagan ayaa sheegay in haddii dib loo soo celin lahaa xilliyadii uu garoomada ku soo jirey uu aad u jeclaan lahaa in ay noqoto waqtigii ay koobka adduunka ku guuleysteen xulka Faransiiska ee 1998dii.
Zidane ayaa ciyaaraha ka fariistey kadib koobkii adduunka ee 2006dii kulankii finalka ahaa oo uu gool u dhaliyey xulkiisa balse kaarka cas loo taagay markii dambe.